CELUM Ọganihu Digital Asset Management | Martech Zone
Anyị na e dere banyere nzube nke Njikwa Akụrụngwa sistemụ na ike ha iji nyere aka chekwaa akara na izi ozi, nye igwe nyocha maka ịchọta ọdịnaya, yana ụzọ ịtụgharị ụdị mgbasa ozi iji jiri ọwa dị iche iche. Ndị ahịa dị elu ọbụna na-eji sistemụ ahụ iji nyochaa ahịa na ntinye azụmaahịa yana ire ahịa.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ usoro DAM ndị ọzọ bụ usoro faịlụ dị ebube nke na-adịghị emeziwanye usoro, ỌLỌ Ewubela ka ọ bụrụ ebe etiti maka ọdịnaya. Ọ nwere ike ịme dị ka a ga - asị na ọ bụ ERP gị, CRM, PIM ma ọ bụ sistemụ njikwa ọdịnaya web ma na - enye ohere ịdebanye aha ọdịnaya na ọtụtụ ọwa.
Ikpo okwu na-enye ohere ụdị hazie peeji nke nbanye ha, dashboard na ebe ọrụ - nke ndị ọrụ ime na ndị mpụga nwere ike ịhụ. A na-ejikwa profaịlụ dị iche iche na interface jikwaa ọkọlọtọ, nke enwere ike ịhazi maka ndị ọrụ dị iche iche site na iji Ngwa Njikwa Nhazi (CMA).
ỌLỌ ewepụtala a njikwa mmịfe ọhụrụ maka office.connect na Power Point®. Usoro ahụ nwere ike itinye ihe ngosi site na otu ma ọ bụ ọtụtụ ihe ngosi n'ime ihe ngosi dị ugbu a. Enwere ike ịhọrọ ọtụtụ slides site na nkwupụta dị iche iche n'otu oge ma tinye ya na ngosi. Onye ọrụ ahụ nwere nghọta na mgbanwe niile emere na ngosi edezi na ịnweta ihe ngosi ndị ewepụtara nwere ike ịnwe mmachi.
Akụkụ nke CELUM's Digital Asset Management:
Mfe uploads na search - Bulite na mfe - otu, ogbe ma ọ bụ n'ụzọ zuru ezu ike uploads. Chọta akụ gị site na ịgbasa wijetị ọchụchọ.
Ihe okike - Wegharia ma soro usoro okike na ihe aga-eme na njikwa ụdị.
Tụọ ihe ịga nke ọma - Hụ ihe ọdịnaya mere nke ọma na nke ọwa - imeghari usoro site na nyocha nke mmasị na mbak nke ọdịnaya akọwapụtara.
Akpaghị aka ikike management - Jikwaa ojiji ojiji, kpuchido ikikere, ma gbaa mbọ hụ na egbochiri ojiji.
Kpọkọtanụ ma nyefee - Mepụta ma wepụta mkpokọta nye ndị na - ege ntị dị iche iche yana nchekwa iji chekwaa ọdịnaya nwere mmetụta.
Jikwaa ụdị faịlụ ọ bụla - Jikwaa ụdị faịlụ ọ bụla ma nweta ike dị ka mmịpụta metadata, ntụgharị na ntanetị kachasị mma maka ihe karịrị faịlụ faịlụ 200.
Nyefee sistemụ ndị ọzọ - Ọdịnaya ọ bụla na sistemụ ọ bụla - kachasị maka netwọkụ nnyefe ọdịnaya dị iche iche na ngwaọrụ. CELUM enwere ike ijikọ ya na sistemụ ọ bụla site na API ndị dị ike.
Ohere nnweta - Otu n’ime usoro ikike nnweta ikike na-achịkwa ike na ụlọ ọrụ njikwa ọdịnaya. Inye ikikere nke ihe nketa na-eme ka usoro nnabata dị mgbagwoju anya na enweghị mfe.
Social media na ọdịnaya - Ngwakọta na mmeri
Download CELUM's Whitepaper: Ihe kpatara azụmahịa gị ji achọ DAM
Tags: njikwa akaraika ngwá ọrụcelumnhazi njikwa ngwadamnjikwa ihe onwunwe dijitalụụdị faịlụụlọ ọrụ. njikọpowerpointakara ngosi ike